Ithegi: amakhadi ekrisimesi | Martech Zone
Maka: amakhadi ekrisimesi
Abaxhasi bethu eZoomerang bakhuphe isaveyi yeholide kwaye bafumanisa ukuba i-63% yabaphenduli abayi-1,000 2011 baya kuthumela amakhadi eeholide exesha lonyaka leholide ka-XNUMX. Ngexesha apho umbhalo, i-twitter, kunye nohlaziyo lwe-Facebook zezona ndlela ziphambili zohlaziyo lwemihla ngemihla, ikhadi leholide lihlala lingumgangatho wegolide wexesha lonyaka apho abantu bajonge ukugcina izithethe ziphila. Sebenzisa ukufanisa okulula: imiyalezo yemidiya yoluntu ngamakhadi eeholide njengeholide
Kubonakala ngathi veki nganye ndikhuphela olunye uhlaziyo lwenkonzo yeVista. Kutshanje, iVista yayinePakethe yeNkonzo kwangolo suku apho iApple yahlaziya i-10.5.3 yohlaziyo lwe-OS X Leopard. Ukusukela uhlaziyo kwiNgwe, bendineetoni zemicimbi ndisebenzisa isikhangeli ... nokuba yiSafari okanye yiFirefox. Namhlanje ndithathe isigqibo sokufaka iSafari kwakhona ukuze ndibone ukuba ndingayilungisa na kube kanye. Xa ndiqala ukufakela, bendikhona
NgoLwesithathu, Aprili 23, 2008 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Le intle (kwaye ayinangqondo) bug endigijime kuyo namhlanje. Ndifuna ukuphinda ndenze ubungakanani kwakhona bomfanekiso ndisebenzisa imbonakalo ukusuka ku-140px ububanzi ukuya ku-100px ububanzi. Ukujonga kwangaphambili ngekhe kuyigcine xa ndicofa u-Kulungile. Ndicinga ukuba ndiyifumene-jonga kubungakanani besiphumo.
Ngaba wakha wanoluvo lokuba kukho into eyenzekileyo, embi ngokwenene ukuba iza kwenzeka? Isikrini seVista malunga nokuSebenza kwiMacBookPro yam ngokufana kwe-3.0 kunye ne-OSX Leopard.